‘राजनीतिमा म शेरबहादुरभन्दा सिनियर हुँ, केहीमा कम छैन’ | Ratopati
‘राजनीतिमा म शेरबहादुरभन्दा सिनियर हुँ, केहीमा कम छैन’
अर्जुननरसिंह केसीसँगको अन्तरवार्ता
personरोहित दाहाल exploreकाठमाडौं access_timeजेठ ११, २०७६ chat_bubble_outline2
काठमाडौँ– नेपाली काँग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहँदा पनि जनस्तरबाट चर्को आलोचना खेपिरहेको छ । वर्तमान सरकारको काम कारबाहीले जनतामा आशाको दियो अस्थाउँदै गएको देखिन्छ । यता प्रतिपक्षी काँग्रेसप्रति कुनै आशा जागेको पाइँदैन । नागरिकले काँग्रेसमाथि निरिह प्रतिपक्षी आरोप लगाइरहेका छन् । तर जनता जगाउने भन्दै काँग्रेस यति बेला राष्ट्रिय जागरण अभियानका साथ जनता माझमा छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहल अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको काँग्रेसले जागरण अभियानबाट जनतामा आशाको दियो जगाउँला ? पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह के हो ? काँग्रेसले प्रभावकारी प्रतिपक्षी भूमिका प्रदर्शन गर्न कस्तो तयारी गरिरहेको छ ? यी यस्तै प्रश्नाबारे काँग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीसँग रातोपाटी टिभीमा रोहित दाहालले जवाफ मागेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसले जागरण अभियान थालेको छ । तपाईं कुन ठाउँमा खट्नुभएको छ ?
म मकवानपुरमा खटेको छु ।
जागरण अभियान कस्तो चलिरहेको छ ?
ठीकै छ । राम्रै ढङ्गले चलिरहेको छ । साथीहरूमा नयाँ उत्साह र विश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ । सबै साथीहरूको एउटै किसिमको धारण छ । तपाईंहरूले जागरण अभियान चलाउँदै गर्दा आफू पनि जागृत हुनुहोस् भनिराख्नुभएको छ । पार्टीको केन्द्रीय तहमा एकताको निर्माण गर्नुहोस् । त्यो जागरणभन्दा पनि पार्टीका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने प्रश्न आइराखेका छन् । हामी पनि काँग्रेसको २००७ सालदेखि अहिलेसम्मका गतिविधि बताइरहेका छौँ । वर्तमान सरकारको कार्यशैलीका बारेमा पनि बताइरहेका छौँ ।
जागरण अभियानमा कार्यकर्ताले तपाईंहरूलाई दर्जनौँ प्रश्नहरू तेस्र्याए तर उनीहरूले दिएको सुझाव पार्टीमा लागू हुने त देखिँदै नि ?
होइन, त्यो सुझाव भनेको अहिलेको अहिले नै लागू हुने कुरा होइन । हामी तल्लो तहका कार्यकर्ताको भावना बुझ्न नै गएका हौँ । सबै साथीले कार्यकर्ताका भावना सुनेर त्यसबारे के विकल्प छन् ? कसरी अगाडि जान सकिन्छ भनेर छलफल गर्छाँै ।
कतै कतै जागरण अभियानमा कुटाकुट हुने अवस्था पनि आयो नि होइन ?
साधारणतय कहिलेकहीँ त्यस्तो हुन्छ, जस्तो सिन्धुपाल्चोकमा त्यो किसिमको घटना भयो भन्ने कुरा मलाई सुन्नमा आयो । त्यो दुःखद् कुरा हो । तर विचारका विविधता हुन्छन् । लोकतन्त्र भनेकै वादप्रतिवाद र संवादको प्रक्रिया हो ।
कुटा कुट गर्नु त लोकतन्त्र नहोला नि ?
म त्यही भन्दै छु, त्यो लोकतान्त्रिक होइन । लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र विचारको विनिमय, विषयमा विमति र कहिलेकहीँ व्यक्तिको टकराव पनि हुन्छ तर हात हालाहालको स्थिति हुन राम्रो होइन । त्यो कुन परिवेशमा कसरी भयो, त्यसबारे पार्टीले सोच्छ ।
पार्टीभित्र जुन कार्यशैली छ, जुन ढङ्गले विधि विधानभन्दा पनि कुनै निश्चित समूहको स्वार्थका लागि काम गर्ने प्रवृत्ति थियो, छ । त्यसलाई हामीले विरोध गरेकै हो । त्यसलाई फेरि पनि विरोध गर्छांै ।
तपाईंले जागरण अभियान जानुभन्दा अगाडि केन्द्रीय अनुशासन समितिले नेताविरुद्ध नबोल्न निर्देशन जारी गरेको थियो । तपाईं लोकतान्त्रिक पार्टी भनिरहनुभएको छ ?
त्यो निर्देशन कहाँ छ ? मैले अनलाइन, पत्रिकामा सुनेको हो । हामीलाई कुनै त्यस्तो निर्देशन आएको छैन । लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र पार्टीको विधानमा बसेर हरेकले आफ्ना दृष्टिकोण राख्ने हकलाई कसैले रोक्न सक्दैन । यो मनोलिथिक पार्टी होइन । हाम्रो त लोकतान्त्रिक पार्टी हो । पार्टीको विधानभित्र बसेर आफ्ना कुराहरू बढो प्रष्टसँग जुनसुकै पदाधिकारी वा सभापतिलाई पनि भन्छौँ । तर हाम्रो विधान र महाधिवेशनले निर्धारण गरेको लक्ष्मण रेखा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तपाईंले सार्वजनिक रूपमा अलि बढी नै पार्टी सभापतिको विरोध गरेकाले त्यस्तो गरिएको हो कि ?
पार्टीभित्र यस्ता गुट उपगुट छन् । त्यसको जिम्मेवारी पार्टी सभापति देउवाको मात्र हो र ?
होइन, त्यो जिम्मेवारी कसको भनेर वादविवाद वा दोषारोपणभन्दा पनि हामीभित्रैबाट कहाँ–कहाँ कमजोरी भयो सुधार गरौँ । पार्टीभित्र गुटउपगुटको कुरा गर्नुभयो, त्यो कसमा छैन ?
मैले काँग्रेसको मात्र सोधेको ?
काँग्रेसभित्र गुटउपगुटभन्दा पनि खरो दुईवटा विचार छ । त्यो भनेको एउटा यथास्थितिवादबाट नै पार्टी चल्छ र यसबाट नै पार्टी चलाउँछौँ भन्ने विचार । अर्को पार्टीमा आमूल सुधारको खाँचो छ भन्ने सुधारवादी विचार ।
यथास्थितिवादी को भए नि ?
यसलाई भनेर म व्यक्तिबाट टुङ्ग्याउन सक्दिनँ । तपाईं आफै बुझ्नुहोस् । अहिलेका भन्दा सुधार नचाहने अहिलेकै ठीक भन्ने यथास्थितिवादी हुन् ।
तपाईंहरूले चाहेको परिवर्तन के हो ?
पार्टी नेतामुखी होइन, नीतिमुखी हुनुपर्यो । यो पार्टी व्यक्तिमुखी होइन, संस्थामुखी हुनुपर्यो । यो पार्टी जो सत्तामा बसेको छ उसले सत्ताले होइन, सत्यले चलाउनु पर्यो । पारदर्शी, नीतिसङ्गत र विधिसङ्गत ढङ्गले चल्नुपर्यो । त्यही व्यवस्थामा अहिलेको कार्यशैलीमा परिणत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार हो ।
यसको मतलब पार्टी अपारदर्शी ढङ्गले चलेको छ ? पार्टी विधिसङ्गतभन्दा नेतामुखी ढङ्गले चलेको छ भन्ने हो ?
पार्टी अहिले नेतामुखी नै छ र केही सीमिति समूहले नेतृत्वलाई प्रयोग गरेको भन्ने कि सीमिति समूहलाई नेतृत्वले प्रयोग गरेको भन्ने जे भने पनि हुन्छ । जस्तै; जागरण अभियानकै कुरा गरौँ । जागरण जस्तो राष्ट्रिय अभियान सुरु हुँदा केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल भएन । केवल पदाधिकारीले जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने भनेर परिपत्र गर्नुभयो । पार्टीको हितकको निम्ति जागरण अभियान ठीकै हो भनेर हामी खटाएको ठाउँमा गयौँ । सामूहिक रूपमा छलफल गर्ने तवर तरिका र चित्त नबुझेको कुरामा खुला रूपमा बहस कम हुँदै गएको हो । अहिलेको शैली परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । पार्टीभित्र त्यही परिर्वतनका लागि कोशिस गरिरहेका छौँ ।
त्यसो भए सभापतिले यस्तो किन गर्न चाहिरहेका छैनन् ?
यसबारेमा उहाँलाई नै साध्नुहोस् । मैले उहाँलाई निर्वाचनमा पार्टी पराजित भइसकेपछि समीक्षा गर्दाको बखत भनेको थिएँ । निस्पक्ष रूपमा समीक्षा गरौँ । जस लिन सबै तँछाड मछाड गर्छन्, अपजस लिन कोही तयारी हुँदैनन् । पार्टी पराजयको सबैभन्दा बढी सभापतिको हैसियतले तपाईंले लिनुपर्छ । अनि महामन्त्री र पदाधिकारीले पनि लिनुपर्छ । साथै म र मजस्ता सबैले पनि लिन्छौँ भनेको थिएँ । त्यो उहाँ मान्न तयार हुनुभएन । कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखी भन्दा यो तरिकाले पार्र्टीलाई पुनः स्थापित गर्नुपर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी दिलाउन सफल हुँदैन भन्ने हो ।
पछिल्लो सयम काँग्रेस नेताहरूबीचको आरोप प्रत्यारोप सडकमै पोखिन थालेको छ । अब १४औँ महाधिवेशन लाग्यो भन्दा हुन्छ ?
त्यस्तो त होइन । सभापतिलाई मेरो आग्रह छ । १४औँ महाधिवेशन समयमै गरौँ । महाधिवेशन जति चाँडो गर्न सक्यो पार्टीमा त्यति नै नयाँ ऊर्जा, नयाँ विश्वास र एकता कायम हुन्छ । अनि पार्टीको नेतृत्व सामूहिक खालको हुन्छ । दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, ८ सहमहामन्त्री निर्वाचित भएर आउँछन् । अहिलेको जस्तो एकल नेतृत्व हुँदैन । पार्टीले नयाँ गति समात्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
पराजित भएको दुई वर्षपछि असहमति जनाएको हुँ । त्यो बीचमा उहाँले अधिकांश मसँगको सल्लाहबेगर निर्णय गर्नुभयो । त्यो सबै यहाँ भन्न सक्ने अवस्था छैन । म पनि पार्टीको सिनियर नेता हुँ । उहाँभन्दा केहीमा कम छैन । विद्यार्थी राजनीति गर्दा उहाँभन्दा सिनियर नै थिएँ तर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, पार्टी सभापति हुनुभयो ।
१४औँ महाधिवेशनमा सभापति देउवाको टिमबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार उठ्नुभएको थियो । यतिबेला तपाईं कुन गुटमा हुनुहुन्छ ?
म कुनै गुटमा छैन । म सुधारवादी पक्षधर हो । मैले अघि पनि भनिसकेँ ।
त्यसो भए तपाईं पनि गुट निर्माणमा हुनुहुन्छ ?
होइन्, हामी सुधारवादी जति छौँ एक ठाउँमा छौँ । अहिलेको यथास्थितिवादी तरिकाबाट पार्टी सञ्चालन हुन सक्दैन भन्नेहरू सबै एक ठाउँमा छौँ । हाम्रो सुधारवादी आन्दोलन जारी रहन्छ । हामी सँगै जान्छौँ ।
हिजो शेरबहादुर देउवाको टिमबाट महामन्त्री लड्नुभयो । अनि पराजित भएपछि विरोध गर्दै हिँड्न सुहाउँछ र ?
पराजित भएको दुई वर्षपछि असहमति जनाएको हुँ । त्यो बीचमा उहाँले अधिकांश मसँगको सल्लाहबेगर निर्णय गर्नुभयो । त्यो सबै यहाँ भन्न सक्ने अवस्था छैन । म पनि पार्टीको सिनियर नेता हुँ । उहाँभन्दा केहीमा कम छैन । विद्यार्थी राजनीति गर्दा उहाँभन्दा सिनियर नै थिएँ तर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, पार्टी सभापति हुनुभयो । उहाँ नेता हो । यसमा मेरो विवाद छैन तर महाधिवेशनमा म औपचारिक उम्मेदवार भएँ, लडेँ । त्यहाँ भित्री रूपमा उहाँको कोसँग सम्झौता भएको थियो । त्यो मैले राम्रोसँग बुझिसकेँ । म त्यतातिर जान्नँ । तर शेरबहादुरजीमा विद्यार्थी हुँदा खालको सहजता थियो । कुनै पनि कुरामा खुला रूपमा छलफल गर्ने र आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा भनी पनि हाल्ने । फेरि यो हुँदैन भनेर तर्क दिएपछि चित्त बझाउने बानी थियो । मैले त्यही अनुभवका आधारमा उहाँसँग बसेर पार्टीलाई नयाँ गति दिन सकिन्छ, सोचेको थिएँ । अब उहाँ त्यस्तो रहनुभएन ।
नेताहरू आफ्ना वरपरकाले पहिलेदेखि नै घेरिन्थे । बीपी कोइरालादेखि सुशील कोइरालासम्म सबै नघेरिएका होइनन् । पहिले नेताहरूलाई घेर्दा घाँटीसम्म घेर्थे । उहाँ कान र आँखा सबै छोपिनेगरी घेरिनुभयो । त्यसबाट उहाँलाई बाहिर ल्याएर पार्टीलाई नयाँ गति दिन सकिन्छ भन्ने मलाई लागेन ।
त्यसो भए आज रातोपाटीबाट घोषणा गरिदिनु हुन्छ त ? अब शेरबहादुर देउवाबाट पार्टी चल्दैन भनेर ?
उहाँको कार्यशैलीप्रति मेरो चरम असन्तुष्टि छ । नीतिगत, नेतृत्वगत र संस्थागत रूपमा पार्टीभित्र व्यापक परिवर्तन ल्याउन क्रियाशील छौँ ।
तपाईंले आफू सुधारवादी पक्षधर भन्नुभएको छ । अब शेरबहादुर देउवासँगै रामचन्द्र पौडेलबाट पनि पार्टी सञ्चालन हुन सक्दैन भन्ने हो ?
हाम्रो निष्कष सामूहिक नेतृत्वबाट चल्छ भन्ने हो । व्यक्ति कसैबाट पनि चल्दैन ।
तपाईंले जति सामूहिक नेतृत्वको कुरा गरे पनि पार्टी चलाउने सभापतिले नै गर्ने होइन र ?
पार्टी त सभापतिले नै चलाउने हो । पार्टीको सक्ति सम्पन्न सभापति नै हो तर पार्टी चल्न प्रवक्तादेखि साधारण सदस्यसम्म उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । सभापतिभन्दा तल ५ जना पदाधिकारी निर्वाचनबाटै आएको खण्डमा पार्टी संस्थागत ढङ्गले चल्छ । सभापतिले विधि र विधान बाहिर जाने कोशिस गरेको खण्डमा ट्र्याकमा ल्याउन सजिलो हुनेछ ।
१४औँ महाधिवेशनबाट काँग्रेसमा कुन उमेर समूहको नेतृत्व आउँछ ? देउवा र पौडेलको विकल्पमा दोस्रो तहका नेता खडा हुन्छन् कि उनीहरू नै रहन्छन् ?
को रहन्छ, को रहँदैन भन्ने कुरा अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । हाम्रो पक्षबाट सहमतिमा जो लडे पनि एक जना लड्छ ।
तपाईं लड्नुहुन्छ ?
म पनि लड्न सक्छु । सुधारवादी पक्षबाट सामूहिक रूपमा मात्र ।
तपाईंको देशदौडाह सभापतिकै लागि हो ?
त्यो अहिले नै नभनौँ । देशभरी आफ्ना साथीहरूले बोलाएको ठाउँमा जाइन्छ नै ।
काँग्रेस निर्वाचन भएको डेढ वर्षपछि बल्ल कार्यकर्ता माझ पुग्दैछ तर संसद्मा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका खेल्न सकिरहेका देखिँदैन नि ?
सदन र सडकमा प्रतिपक्षका रूपमा हाम्रो भूमिका जुन तरिकाले हुनुपर्ने थियो त्यो हुन नसकिरहेको भन्ने गुनासो हामीभित्रै पनि छ । त्यसलाई हामी प्रभावकारी बनाउँछौँ । तर नेपाली काँग्रेसलाई प्रतिपक्षी भनेर हेर्दा कम्युनिस्ट प्रतिपक्षी जस्तोझैँ हेरिदिनुभएन । हाम्रो प्रतिपक्षी रूप सडकका रेलिङ तोडिहाल्ने र संसदका सबै टेबल कुर्सी भाँचिहाल्ने होइन । हामी लोकतान्त्रिक विधि र संस्कारका सहजकर्ता पनि हो । हामी लोकतान्त्रिक संस्कृतिभित्रैबाट प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छौँ ।
हामीले अझै मुलुकमा सहमति र सहकार्यको आवश्यकता छ भनेर संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको हो । त्यसको बैठक बस्दा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, दुईवटै संसद् र प्रतिपक्षी दलको नेता रहनुपर्ने भनिएको छ तर त्यहाँ प्रतिपक्षी दलको नेतालाई बोलाउँदै नबोलाई पनि चलेको छ । सरकारले नबोलाएको हो कि, हाम्रो नेताले आलटाल गर्नु भएको भनेर पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा पनि कुरा उठाइएको थियो ।
तपाईंहरूले मूलभूत सिद्धान्त र विचारमा कहीँ बहस गरेको पाइँदैन नि ? बजेटकै कुरा गरौँ । राष्ट्रिपतिले मेरो सरकार भनेको र प्रधानमन्त्रीले निम्छरो भनेको पछाडि लाग्नुभयो ?
राष्ट्रिपतिले मेरो सरकार भन्नु, साथै प्रधानमन्त्रीले अरू देशको पनि प्रचलन छ भनेर भन्नु हास्यास्पद कुरा हो । संविधानको धारा ७३ को ३ ले मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने सम्पूर्ण निर्णय र काम कारबाही नेपाल सरकारको नाममा गरिने छ भनेर प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा र प्रचलन लागू हुँदैन । यस्तै सरकारका प्रवक्ताले जय नेपाल पुलिसबाट ल्याएको हो भनिदिनुभयो । जय नेपालको इतिहास उहाँलाई थाहा छैन जस्तो छ । उहाँले अमेरिकारमा पत्रकारलाई मृत्युडण्दसम्बन्धी सजाय छ पनि भनिदिनुभयो । त्यो कहाँ छ ? मैले यस्ता कुरा बोल्दा म जिम्मेवार हुन्छु भने प्रधानमन्त्री र प्रवक्ताले यस्तो भन्न मिल्छ ?
काँग्रेसले प्रतिपक्षीको भूमिका प्रभावकारी देखाउन नसक्नु विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिमा खोजिएको भागबण्डा हो भन्ने गरिन्छ नि ?
यहाँ भागबण्डाका कुराभन्दा पनि संवैधानिक परिषद्को कुरा छ । हामीले अझै मुलुकमा सहमति र सहकार्यको आवश्यकता छ भनेर संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको हो । त्यसको बैठक बस्दा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, दुईवटै संसद् र प्रतिपक्षी दलको नेता रहनुपर्ने भनिएको छ तर त्यहाँ प्रतिपक्षी दलको नेतालाई बोलाउँदै नबोलाई पनि चलेको छ । सरकारले नबोलाएको हो कि, हाम्रो नेताले आलटाल गर्नु भएको भनेर पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा पनि कुरा उठाइएको थियो । अब भागबण्डाको कुरा छ । हामीलाई थाहा छैन । मिडियालाई थाहा छ भने खुलाइदिनुहोला ।
अब अन्त्यमा यो सरकारका बारेमा केही कुरा भन्नु छ ?
सरकार एकपछि अर्को ढङ्गले अधिनायकवादी बाटोतिर गइरहेको छ । संसारमा संसदीय व्यवस्था भएका देशहरूमा संसद् जन्मन्छ अनि सरकार जन्माउँछ तर वर्तमान सरकार संसद् जन्मनुभन्दा अगाडि नै जन्मियो ।
संविधानले नै सभामुख र उपसभामुख अलग अलग पार्टीको हुनुपर्छ भनेको छ, त्यसलाई पनि मिचियो । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयक र सुरक्षा परिषद् विधेयकमा सरकारले गलत नियत राखेको पाइन्छ । यी विधेयक पारित हुन नदिन हामी संसद्मा अन्तिमसम्म सङ्घर्ष गर्छौं । भएन भने सडकमा पनि उत्रिन्छौँ ।
सरकारसँग दुई तिहाइ छ । यी विधेयकलाई राक्ने तपाईंसँग ल्याकत छैन नि ?
हामीसँग ल्याकत छ । तपाईं हेर्दै जानुस्, हाम्रो ल्याकत र तागत २००७ सालमा पनि देखाएकै हो, २०४७ सालमा पनि देखाएकै हो, ६२–६३ मा पनि ल्याकत र नेतृत्व देखाएको हो । तपाईं एक चोटि छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस् । काँग्रेस सङ्घीयता र गणतन्त्रको सहमतिको यात्रामा नगएको भए यहाँ गणतन्त्रण आउँथ्यो ? त्यसकारण हामीसँगको ल्याकतको कुरा नगर्नुहोस् ।
त्यसो भए काँग्रेसबाट प्रतिपक्षी भूमिकाको महसुस गर्ने केही समय पर्खिनुपर्ने भयो ?
तपार्इंलाई प्रष्ट भन्छु, पार्टीको आन्तरिक सुधारमा लागेका छौँ । केही समय प्रतिपक्षको भूमिका सकारात्मक र सहजकर्ताके हुनुपर्छ ? उग्र हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो मनसाय थियो, छ । यस्तै हो भने काँग्रेस एउटा समयमा उग्रताको बाटोमा पनि जान सक्छ ।
त्यसका लागि कति समय पर्खनुपर्ने हो भनेको ?
६ महिना पर्खिनुहोस्, किन १५, २० वर्षको कुरा गर्नुहुन्छ ? केही समय लाग्छ । ६ महिनापछि हामी सडक, सदनमा उभिन्छ ।
साथै अहिलेका यी तीनवटा विधेयकलाई काँग्रेसले त्यति सजिलोसँग पारित हुन दिँदैन ।
May 27, 2019, 8:53 a.m. shivaram
k ko senior ra junior ko kura garxau ali laaz lagnu parne ho tapai haru sabai lai jun sukai party ka bhaye pani aakhir ma bachha lai jastai gari janata lai lolly pop khuwayera desh rastra ani janata lai lutnu samma luteu ani senior ra junier ko kura garne desh lai 2046 aghi ko bhanda pani jhan pachi 200 barsha pachi pari haleu akhiri maa k bolnu paunu swatantrata bikash ani sambridhi ko fall nai yehi prajatantra loktantra ganatantra ko fall yehi nai janata lai ?
May 25, 2019, 4:04 p.m. Subas koirala
Tapai panchayet ko senior ki congress ko? Ani tapai mantri bhayer k chahi par launu bho? Jas uphas ko kuro barabar hunch.aafu harne thulo kuro garne Laj lagnu parne aafnai party bsijyat garn .yesto ni neta hunch .chi chi